kml - Iphepha 3 - iGeofumadas
IGeofumadas: nantsi phakathi kwethu
Kule veki, ngaphandle kokulinda umntwana oza kuba ngumntwana omtsha, ndiye ndanethuba lokudibana nomhlobo webhlog ondibambe phambi kokuba ndize kula mazwe wandixelela ukuba ufuna udliwanondlebe ngeenjongo zakhe. Ndonwabile ukwazi ukuba emva kweeyure ezimbalwa zokubaleka ...
Acer balangazelela AutoDesk Bentley Systems Blog KML egeomates My
Internet kunye neBlogs, egeomates My
Kuza kubakho ntoni kwinkomfa yasimahla ye-GIS?
Kwiinyanga ezintathu phambi kokuqala kweNkomfa ye-IV, eza kuqhubeka ukusuka nge-10 ukuya kwi-12 kaMatshi, esi sisindululo sento esinokuyibona apho. IDE / OGC IDE Umthombo ovulekileyo: Indlela eya ku-INSPIRE. Izibonelelo zedatha yendawo yaseVenezuela, i-100% yesoftware yasimahla ye-IDE. Ukudityaniswa kwengcebiso yeWMS-C kwi ...
Plex.mark! Luphuhliso olwenziwe kwiGoogle Earth ActiveX, eqhuba ukusebenza ngokuthe ngqo kwi-UTM, hayi kuphela ukufumana ulungelelwaniso kodwa nokungena. Ngaba simahla. Faka iPlex.mark! Kuya kufuneka ikhutshelwe kwiPlescape, umenzi waseGrisi wezixhobo zePlex. Emva kokuyifaka, indlela emfutshane yenziwa kwidesktop. Ye…
Umhlaba ka-Google KML PlexEarth
Okomzuzwana bendinokuthandabuza, ukuba uBentley ebethetha ngefomathi entsha yokutshintsha i-dgnV8, ndiye ndacinga ukuba luhlobo lwefomathi ecinezelweyo njenge-kmz nge-Google Earth's kml. Kwiinyanga ezininzi ezidlulileyo ndenze iposti, ndifuna ukucinga ukuba i i yeV8i yayithetha ntoni, ...
Microstation-Bentley, egeomates My
Umphathi we-KML, ezininzi kwi-12 Euros
Izisombululo ezincinci zihlala zitsala umdla wam, ndicinga ukuba ukuba abadluli ngaphezulu kwe- $ 50 kwaye basombulule ukuba yintoni le nkqubo inkulu ingakwenziyo, kufuneka babe nethamsanqa. Namhlanje ndifuna ukukubonisa umphathi we-KML, isixhobo esingahambi kangako kwi-12.95 Euro, inobunzima obungaphantsi kwe-1 MB kodwa akukho nto siyibonayo ngaphakathi ...
Google umhlaba / imephu, egeomates My
Kwiminyaka embalwa edlulileyo uGoogle waqalisa ukwenza imephu yamashishini, kule projekthi yayihlawula i $ 10 kwishishini ngalinye elalichazwe. Ngoku kukho isiseko esinokuboniswa kuzo zombini iimephu zikaGoogle kunye noGoogle Earth. Ngoku masicinge ukuba kukho isicelo, esinika indawo kunye ne-radius ...
I-TopoCAD, ngaphezu kwe-Topo, ngaphezu kwe-CAD
I-TopoCAD sisisombululo esisisiseko kodwa esibanzi sophando, umzobo we-CAD, kunye noyilo lobunjineli; nangona esenza okungaphezulu kokuzivelela okumthathe ngaphezulu kweminyaka eli-15 emva kokuzalwa kwakhe eSweden. Ngoku isasazeke kwihlabathi liphela, ngeelwimi ezili-12 kunye namazwe angama-70 nangona kubonakala ngathi ayiphumelelanga ...
AutoDesk Bentley Systems Dgn Dwg ESRI GPS KML umbono yam yokuqala shp
ArcGIS-ESRI, GPS / Izixhobo, Zobunjineli, Topography
I-Google Earth iphucula indlela okwazisa ngayo ukuhlaziywa kwakho
Rhoqo emva kweenyanga ezimbini, uGoogle Earth uhlaziya imifanekiso yakhe, kodwa indlela yokwazisa ibikhankanya ilizwe, isixeko esikufutshane kwaye kwade kwatshiwo ngale ndlela: Jonga, sihlaziye imifanekiso, inyani ayisiyiyo Siyavumelana ukuba ujonge phi ngokwakho ...
Bonisa umfanekiso we georeferenced kwiGoogle Earth
Masicinge ukuba ndifuna ukubonisa ngendlela echaziweyo umfanekiso okhoyo kwiwebhu. Besele ndithethile ngale nto ngaphambili, kodwa kule meko ndifuna ukwenza iprojekhthi engekho kwi-hard drive yam kodwa ikwi-Intanethi. Le yimeko yemephu yesiphoso sejografi yaseHonduras kwaye iyafumaneka ...
Kuphi ukufumana imephu kwifomathi ye vector
Ukufumana iimephu kwifomathi yelizwe elithile kunokuba yinto engxamisekileyo kuninzi. Ukufunda iqonga likaGabriel Ortiz Ndifumene eli khonkco linomdla kuba aliboneleli kuphela ngeemephu kwiifom ze-.shp, kodwa nakwi-kml, igridi kunye ne-mdb. Yi-gData, inkonzo ekhuthazwe liZiko loPhando lwaMazwe ngaMazwe, ...
Umhlaba ka-Google KML shp
I-3 blogs kunye ne-8 geofumadas kwi-fly
Ndiza kuba seHouston ndizimase iseshoni yoqeqesho, kwaye ndiphumle ngokwenyani kuxinzelelo lweli lizwe elinefomathi ye-kml ebonakala ngathi ilahlekelwa lula. Inyanga izisa imihla yokuzalwa kwezinto ezixabiseke kakhulu, ndibhiyozela iminyaka emibini ye-geosmoking ngathi iphambene, kwaye njengoko ihamba ... iya kuhamba nohambo. Ndicebisa iiblogi ezi-3 eziya kuthi ngokuqinisekileyo zibe nokuninzi ...
Blog Umhlaba ka-Google KML GIS asibonise egeomates My
Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo bendithetha ngamacwecwe eteknoloji ahlelwe yi-USGS ukuba ibonwe kwi-kml elula ye-107 k, kwaye koku kufuneka sazi ukuba uGoogle Earth ubutshintshile ubomi bethu ukuze sikwazi ukubona nge-intuition elula yokuba singobani iingcali zezifundo. Olu luhlu ...
Indlela yokubeka ividiyo kwiGoogle Earth
Ndifumana umbuzo, apho umntu afuna ukulayisha ividiyo kwiGoogle Earth, ndiyaqonda ukuba ifuna ukubonisa iindlela kunye nokongeza ividiyo kubo. Masibone into enokwenziwa kwaye abahlobo bethu baseMexico banokufaka isicelo, kufana nokuthumela ifoto. Shumeka ividiyo ye-YouTube ndicinga ukuba ndifuna ...
Umhlaba ka-Google KML egeomates My
Google umhlaba / imephu, yokuzonwabisa
I-2 i-Geofumadas enhle kunye nabanye kwi-fly
Ukulungiselela ukuthatha intombi yam ukuya kugqirha wamazinyo, kwaye uchithe impelaveki ende ndikushiyela amakhonkco onomdla. Eyokuqala zizinto ezimbini ezinomdla endicebisa ukuba ndibukele ngononophelo, kwaye ke umxholo wabanye abafuna ukufundwa okunempilo ngoLwesihlanu ebusuku. Blom, Ubukrelekrele obuBonakalayo: IPictometry yimveliso enomdla ...
Bentley Systems Blog ESRI Umhlaba ka-Google KML egeomates My
ArcGIS-ESRI, AutoCAD-AutoDesk, Google umhlaba / imephu, Microstation-Bentley, egeomates My
Imodeli yomhlaba weDialog kwiGoogle Earth
UValery Hronusov ngumenzi wesicelo se-kml2kml, kuyathakazelisa ukuba namhlanje upapashe inqaku apho uGoogle eyicebisa khona, engaqhelekanga kodwa engazi ukuba isicelo sakhe senza ntoni esilinganise ubunzima be-1MB. Ngexesha elithile elidlulileyo bendithetha ngendlela yokwenza into enje nge-AutoCAD, kunye neContouringGE. Masibone ukuba ...
Google umhlaba / imephu, Topography
I-Fdo2Fdo sisicelo esinomdla esingasebenzi kuphela ukuguqula iifayile kwifomathi yefomathi iye kwi-kml, njengoko iposti ibhengeza kakubi. Okwangoku, iba yenye indlela emva kokubhubha kwe-shp2kml, ethi, ngokwemigaqo yomdali wayo, ibonakale iphelelwe lixesha. Xa ubona ukusebenza kwayo kuyothusa ...
ArcGIS-ESRI, AutoCAD-AutoDesk, Geospatial - GIS, Google umhlaba / imephu
Ikhasi langaphambili Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 kwiphepha elilandelayo